Costa Dorada - Inona no ho hita ary inona no hatao amin'ny fialan-tsasatrao manaraka | Vaovao momba ny dia
Te-hitsangatsangana an-tanety Costa Dorada ve ianao? Izy io dia iray amin'ireo faritra malaza indrindra amin'ny jeografia Espaniôla ary koa iray amin'ireo tena mahaliana. Any atsimo andrefan'ny Barcelona no misy azy ary misy torapasika tsy misy fiafarana ary koa toeram-pialan-tsasatra izay mahaliana azy kokoa raha azo atao.
Marina anefa izany Io faritra io dia mihoatra lavitra noho ny morontsiraka ka noho izany, ny làlana ara-kolontsaina, feno tantara ary koa angano, dia milamina ihany koa momba azy. Noho izany, tsy azonao atao ny tsy mahita ny zavatra rehetra azonao vangiana sy izay azonao atao amin'ny fialan-tsasatrao. Hanana izany rehetra izany eo am-pelatananao! Vonona hankafy an'io ve ianao?
1 Tarragona, iray amin'ireo teboka fanombohana manan-danja indrindra amin'ny Costa Dorada
2 Fitsangatsangana amoron-dranomasina
3 Resort sa filasiana?
4 Fitsidihana ny valan-javaboary Salou
5 Ny fiainan'i Gaudí tao Reus
6 Mandeha amin'ny làlan'ny Cistercian izahay!
7 Mizaha ny Delta Ebro
Tarragona, iray amin'ireo teboka fanombohana manan-danja indrindra amin'ny Costa Dorada
Betsaka ny faritra rakotry ny Costa Dorada, saingy tsy isalasalana fa i Tarragona no mitana ny toerana voalohany. Azontsika lazaina momba azy izany Toa tranombakoka an-kalamanjana izy io, noho ny zavatra rehetra asehony antsika ao amin'ilay antsoina hoe rava an'i Tarraco. Hanao dingana vitsivitsy miverina any aoriana isika mba hahitana tetezana, tilikambo toa ny an'ny Scipios ary na dia ny rindriny taloha aza, izay tsy miverina amin'ny vanim-potoana romana. Izany rehetra izany dia iray amin'ireo toerana arkeolojika manan-danja indrindra, miaraka amin'ny vatosoa tena izy, izay tokony ho fantatra. Ho fanampin'izany, tsy azonao adino ny fitsidihanao ny Katedraly Santa Tecla, ny Mirador del Mediterráneo na ny Port.
Nandeha tamin'ny fitsangatsanganana ara-potoana ka hatramin'ny fiverenana amin'izao fotoana izao izahay ary nahita ny morony rehetra. Satria faritra izay hisy ny fasika hatrany, atambatra amin'ireo rano manjelanjelatra izay tian'izy ireo fatratra. La Pineda dia iray amin'ireo morontsiraka tonga lafatra, mihoatra ny roa kilometatra ny halavanao izay ahafahanao manao fanazaran-tena na filentika. Cala Fonda, fantatra ihany koa amin'ny hoe Waikiki, dia any avaratry Tarragona ary iray amin'ireo mangina indrindra. Raha mahavariana anao ny Santes Creus Beach, izay ahitany ny fomba fijeriny sy ny taratry ny ranomasina. Mandritra ny andro iray iarahana amin'ny fianakaviana sy voahodidin'ny ala kesika dia ny Cap Roig Beach.
Resort sa filasiana?
Indraindray dia manomboka amin'ny toeram-ponenana notadiavinay ny fitsangatsanganana amin'ny dia iray. Satria raha miresaka momba ny morontsiraka mandrafitra ity toerana ity isika, ireo trano fandraisam-bahiny, miaraka amin'ny antsipiriany lehibe, no ho mpiorina amin'izany. Fa raha te hitady zavatra ara-toekarena kokoa sy azo ampiharina ary ho an'ny ankohonana iray manontolo ianao dia afaka misafidy a Camping Costa Dorada. Amin'izany fomba izany dia ho ao anaty tontolo milamina foana ianao ary mazava ho azy, afaka mankafy ny ambanivohitra sy ny morontsiraka ianao rehefa mahatsapa fa toa izany miaraka amin'ireo serivisy rehetra eo an-tanana.
Fitsidihana ny valan-javaboary Salou
Satria ankoatry ny morontsiraka sy fizahan-tany be dia be, Salou koa dia manana ny Valan-javaboary misy lohahevitra PortAventura World. Ka mety ho iray amin'ny fitsidihana tsy maintsy atao, indrindra raha mandeha miaraka amin'ny zanakao ianao. Satria amin'ity fomba ity dia azonao atao ny mankafy ny zava-manintona rehetra amin'ny maha-fianakaviana anao ary ho fanentanana ho azy ireo izany. Mazava ho azy, Salou dia manolotra anao toerana manokana toy ny trano mimanda Torre Vella, raha tianao ny hankafy ny ampahany ara-kolontsaina indrindra amin'ilay toerana.
Ny fiainan'i Gaudí tao Reus
Tsy azonao adinoina ihany koa ny diabe mamaky an'i Reus, satria io no fototr'i Gaudí sy izay rehetra manodidina. Hatramin'ny taona maro dia nonina tao amin'ity faritra ity izy ary androany dia fahatsiarovana lehibe ny mpanakanto, isaky ny zorony. Azonao atao ny mankafy ny tranony ary koa ny Gaudí Center, ivon-toerana fandikana izay hita ao amin'ny Plaza del Ayuntamiento. Ao anatin'izany no ahitanao ireo zavatra manokan'ilay mpanakanto ary misy ihany koa ny efitrano misy ny famoahana ny sanganasany.
Mandeha amin'ny làlan'ny Cistercian izahay!
Làlana iray azonao atao na an-tongotra na bisikileta raha tianao kokoa izany. Amin'ity làlana ity dia manana ianao fijanonana tsy maintsy atao telo izay monastera telo: Vallbona, Poblet ary Santes Creus. Faritra mihoatra ny tonga lafatra hahitana ny harenan'ny maritrano, izay miharihary, fa amin'ny gastr gastrie ary mazava ho azy, amin'ny asa-tanana. Noho izany, iray amin'ireo safidy hafa ireo raha mitsidika ny Costa Dorada isika, dia eo amin'ny làlan-kaleha ihany koa.
Mizaha ny Delta Ebro
Ny fitsidihana ny valan-javaboary Delta del Ebro dia iray amin'ireo teboka fototra mandinika. Hatramin'izany dia hahita karazana biby maro ianao. Fa ho fanampin'izany dia manome anao traikefa nahafinaritra hafa izay azonao atao ny mankafy sy mahatadidy mandritra ny androm-piainanao: Fitsangatsanganana an-tsambo mamaky ny Ebro Delta. Azonao atao ny miditra amin'ny vavan'ny iray amin'ireo renirano manan-danja indrindra, mankafy ny natiora sy ny morony. Manana zotra manodidina ny adiny iray ianao, hatramin'ny iray andro. Faritra inona no hanombohanao ny fialan-tsasatrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Toerana fitsangatsanganana » Dia an-tongotra manamorona ny Costa Dorada: inona no ho hita sy inona no hatao